Saka, Basy Ary Famaboana Fanànana Any Amin’ny Faritra Ambanivohitr’i Idlib · Global Voices teny Malagasy
Saka, Basy Ary Famaboana Fanànana Any Amin'ny Faritra Ambanivohitr'i Idlib
Voadika ny 03 Janoary 2013 13:40 GMT
Maaret Misreen, Syria–Omar, mpianatra iray momba ny fandraharahana ara-barotra fahiny tao aminà anjerimanontolo tsy miankina ao Damaskaosy, dia miaina fiainana izay tsy azony noeritreretina velively. Avy any Idlib no fiaviany, iray amin'ireo tanàna kely any Syria, afovoan'ny tanin'oliva any avaratra-andrefana. Ankehitriny izy dia monina any amin'ny faritry ny tsipika misy ny fifampitifirana amin'ny maha-mpikatroka mafàna fo azy amin'ny media, manadihady herisetra sy manao mpitaridia ireo vahiny mpanao gazety sy ireo mpiasa mpiaro zon'olombelona manerana ny tany Siriana.
Olon-tsotra mpanao gazety, Omar Abu Al Huda, milalao am-pahatoniana miaraka amin'ny sakany tao amin'ny tranony tany amin'ny faritra ambanivohitr'i Idlib Sary:Mohammed Sergie
Niroborobo ny toerana tànan'ireo mpikatroka mafàna fo amin'ny media ao Syria. Ho an'ireo tanora ampolony revolisionera, ny làlana tena mety hanoloran-tena ao anatin'ny fitroarana dia ny fanjariana ho lasa mpandrakitra an-dahatsary (cameraman), handrakitra ireo zava-miseho rehetra any an'ady sy hampakatra ireny ho hitan'izao tontolo izao. Maro no lasa ‘fixers’ – na mpanelanelana ho an'ireo famoaham-baovao vahiny mba ho asa fidiram-bola. Omar, ho azy manokana, tsy mitaky karàma. Nahafaly azy fotsiny ny nanana mpanao gazety iray matianina, indrindra indrindra fa manam-piaviana Siriana, niray dia taminy tamin'ny fivezivezena.
Any amin'ny faritanin'i Idlib, toerana tena anaovan'i Omar ny ankabeazan'ny asany, lasan'ny fitondràna Assad ny fifehezana ny tanàna lehibe, saingy tsy azony kosa ireo faritra manodidina. Ny tafiny, ireo hery fiarovany ary ireo milisy tsy ara-dalàna, na shabiha, dia nihemotra nisintaka ny renivohi-paritany. Ilay tanàna fotsiny dia efa nitombo tamin'ny isa, niainga avy amin'ny 200.000 tonga 750.000, satria ireo mpihoko niady hifehy ireo tanàna sy vohitra tao Idlib dia nandefa ny ankohonany ho any amin'ny havan-dry zareo azo antoka. Tsy afaka ny hilaza zavatra betsaka ry zareo any, saingy afaka tamin'ny zera baomban'ny fitondrana kosa sy ny fanafihana an'habakabaka izay manjo ireo faritra tànan'ny mpihoko.
Omar, izay mandeha eo ambanin'ny anarana fitondrany miady hoe Abu Al Huda, dia nirakitra ho tadidy ny soridrefitanin'ny faritanin'i Idlib, nanoritra ireo làlany mamakivaky toeram-piompiana sy vohitra nandritra ny revolisiona. Taridia fizahantany naresaka tokoa, tsipihany ireo ady nanamarika ireo toby miaramila tany ambanivohitra ary asongadiny ny vokatra nateraky ny fanafihan'ireo MiG sy ny baomba.
“Misosa anaty fiara iray anà maritiora ianao,” hoy izy, manazava fa ilay lavaka eo amin'ny sezan'ny mpamily dia avy amin'ny bala nahafaty ny rahalahiny Mouayad Al Ghafeer, 27 taona, tamin'ny Jona. Zatra nanana ny fiara azy manokana i Omar, saingy nangalarin'ireo mpihoko hafa ilay izy volana vitsy lasa izao, na angamba andian-jiolahimboto mitam-piadiana. Mikaroka mandrakariva an'ilay fiara izy, ary mampilaza azy ireo namany rehefa mahita mitovy marika sy maodely amin'io mandeha eny an'arabe.
“Fiarako talohan'ny revolisiona izy izay ary naloako tamin'ny vidin'ny dinitry ny handriko,” hoy izy .
Mouayad, ilay rahalahiny maty, dia nalevina ao amin'ny toeram-piompian'ny ray aman-dreniny, any aminà tangoron-trano iray amin'ny ilany havanan'ny tanànan'i Idlib. Metatra vitsy miala eo ny fasana vao avy nandevenana an'i Abdullah Allawi, izay nisy namono ny 27 Desambra, ora vitsy talohan'ny nahatongavanay, taorian'ny fifampitifirana tamin'ny tafika Siriana tao amin'ny sakana iray tany amin'ny faritra manodidina an'i Idlib. Nilaza ireo mpihoko fa niditra ny faritra nisy azy ireo ny tafika, nilaza hikaroka mpitsoaka an-daharana ary nitifitra an'i Abdullah, izay 25 taona manan-janaka roa, ary avy eo nisintaka taorian'ny fifandonana. Ity ambany ity ny lahatsarin'ny fifandonana
Nanadihady ilay ady i Omar no sady nandrafitra ny lahatsary ny alimbe tamin'iny andro iny, nifampizara ireo fotoana navaivay niaraka tamin'ireo mpihoko nitangorona nanodidina ny solosaina findainy – manao topimaso amin'ny tenan'izy ireo nandritra ny gidra. Mifindrafindra avy aminà toeram-piompiana iray mankamin'ny iray, nanerana iny làlana iny, izay nitrangan'ady namoizan'aina ora maro ny marainan'io, nisakafo hariva tao an-tranon'ny iray tamin'ireo fianakaviany ireo mpihoko. Namirapiratry ny rehareha tamin'ny voninahitra an'ady azon'ireo zanany ny rain-dry zareo.
Nanandrana niteny azy ireo tamin'ny toroheviny momba ny fomba fipetraka rehefa miady ireo raim-pianakaviana, toy ireny mpanazatra tarika mpilalao baolina ery antsisin'ny kianja ireny, saingy notsinontsinoavin'ireo mpihoko fatratra ireto lahiantitra. Nisy andrin-jiro nidaraboka nandritra ny fifandonana, ary niresaka ny amin'ny hirotsahany hanamboatra izany ireto raim-pianakaviana. Saingy tsy misy maha-maika satria tsindraindray tadiavina vao misy herinaratra mandalo amin'ireny zotra ireny ary efa tapaka ela ny tolotra.
Nolazain'ireo mpihoko fa azo-dry zareo ity fiarabe ity fony nanafika ny toeram-pamaharany ny tafika Siriana tamin'ny faramparan'ny Desambra. Sary: Mohammed Sergie
Nikisaka ho aminà trano iray hafa indray (ity iray ity teo aloha dia anà manamboninahitry ny tafika Siriana saingy raisina ho toy ny fananana nobaboina nandritra ny ady) nampiasa aterineto mifandray amin'ny alàlan'ny zanabolana ry zareo mba hampakarana ny lahatsarin'iny andro iny. Haingana lavitra noho ireo tolotra mandeha ‘cable’ any Etazonia ilay aterineto. Nodiovina ny basy ary nofenoina ny gazetiboky raha ireo mpiady sy mpikatroka mafàna fo kosa nitsotsotra sy nitafatafa momba ny hoavy.
Kely finoana i Omar mikasika ny hoavy, efa mahita tsingeringerin'herisetra aorian'ny fianjeran'ny fitondràna Assad izy. “Te-handao an'i Syria aho, rehefa tapitra ity, ary hamita ny fianarako,” hoy izy. Saingy savolaina ihany koa izy amin'ny fifamatorany amin'ilay tany sy ny vahoakany, fifamatorana iray izay nanjary lalim-pàka tamin'ny alàlan'ny asany, izay tsy hoe fotsiny nampiseho ireo herisetra fa koa mifantoka amin'ireo tantara malefadefaka toy ny fepetra araka ny maha-olona sy ny toetoetry ny vakoka ao Syria.
Lavitry ny herisetra, sarotra ho an'ny Siriana rehetra ny fiainana. Ireo mpihoko sy ireo mpikatroka mafàna fo amin'ny media, ary betsaka toy ny sisa amin'ny vahoaka, no miady mikaroka izay harapaka sy solika amin'ny vidiny azo ihorirànana. Misy saingy lafo be ny mofo.
Nakatona efa ela ireo tobin-tsolika any avaratr'i Syria. Sary: Mohammed Sergie
Ny vidin'ny solika, ampiasaina ho amin'ny fitaterana sy famokarana herinaratra, dia mihodinkodina eo amin'ny $12 sy $15 ny iray daba ao anatin'ny 24 ora. Efa tsy misy intsony izany tobin-tsolika izany any amin'ny faritra maro ao Syria – mahatonga ireo paompy ho tsy misy ilàna azy ny tsy fisian'ny herinaratra, raha faran'izay tsy azo antoka loatra kosa ireo làlana hafa hamenoana azy ireny. Ankehitriny, amidin'ireo mpivarotra an'arabe sy ireo tomponà toeram-pivarotana tsy manana entana hafa hatolotra ny solika. Ny diesel, na solika mavesatra, izay ampiasaina betsaka ho fanafanàna ny ao an-trano, dia lasa rendrarendra tsy takatry ny Siriana maro amin'izao fotoana. Mangatsiaka sy maizina ny alina, ary matetika tapahan'ny feon'ny fidoboky ny balan'ireo fitaovam-piadiana mavesatra miainga avy any an-tanànan'i Idlib mankany ambanivohitra any.
Nifoha maraina be ny sasany tamin'ireo mpiady mba hanatevin-daharana ny ady iray tao akaiky tao, raha mba natory kely kosa indray ireo hafa nanao ny asa fitiliana nandritra ny alina. Taorian'ny fisotroana kaopin-dite kely sy nilalaovana niaraka tamin'ny saka tao an-trano (izay toy ny hoe karakarain'ireo Siriana mpihoko rehetra mihitsy), nampirina ny basy poletany i Omar ary dia namerina ny tsingeringerina saropadiny isanandro: fivezivezena, ady sy lahatsary anaty aterineto.
15 ora izayKaraiba
[…] Kilo: Fanantenana Kely Hisian'ny Vahaolana Ao Syria 2 Jan A New Year of Syria’s Turmoil 2 JanMakorelina, Basy Ary Cats, Guns and Famaboana Fanànana Any Amin'ny Faritra Ambanivohitr'i I… 2 Jan Social Media Buzz: Rebels Lose a Charismatic Commander in […]
27 Aogositra 2013, 20:23